Email 2.0 - Yakapfuma Internet Zvishandiso, Multimedia, yakadzika midzi? | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 24, 2006 NeChishanu, Gumiguru 6, 2017 Douglas Karr
Ini ndanga ndichitaura neshamwari yangu nhasi, Dale McCrory. Akaratidza kuvhurwa kutsva kweAdobe, Adobe Dhijitari Dhinda Beta.
Maererano ne Adobe's site:
Adobe Dhijitari Editions inzira nyowani yekuverenga nekutarisira maBooks uye mamwe madhijitari zvinyorwa. Dhijitari Editions inovakwa kubva pasi kumusoro seyakareruka, yakapfuma Internet application (RIA). Dhijitari Editions inoshanda online uye isingaenderane, uye inotsigira zvese zviri zviviri PDF uye XHTML-yakavakirwa zvemukati.
Dale akasvika pakufunga pane izvi (uye ndinovimba handikurumidze kuburitsa yake $ 5billion zano)… ko kana ukaisa email kero pane ino interface? Mune mamwe mazwi, izvi is email yako mutengi wezveramangwana… Email 2.0 kana uchikwanisa.
Mukana, hongu, ndewokudyisa chero chinhu chaungade kuinbox chero bedzi munhu anenge achinyorera achiwana mukana weInternet… zvishandiso, ongororo, mapota, mapeji anofambidzana, flash, eBooks, zvinyorwa, ruzha, vhidhiyo, nezvimwe. Pasina mubvunzo iyoyo ndiyo nzira yatiri kunanga. Ini handichamiriri!
Tags: kupiswaAdobe Dhijitari DhizainiAdobe Dhijitari Dhinda BetaBeta
Ndiri murudo neStumbleUpon